Fahasamihafana eo amin'ny Homonimona sy Homophone | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Homonimona sy Homophone | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Fitenenana / Teny / Fahasamihafana eo amin'ny homanona sy ny homôphone
8 septambra 2011 Narotsak'i koshal
Homimôna sy homôfôna dia teny roa mifandraika amin'ny tsipelina sy ny fanononana izay mampiseho ny tsy fitovizany. Tsy azo ovaina izy ireo amin'izany. Ny homôfônia dia teny izay mitovy fanononana azy, fa samy manana ny tsipelina sy ny dikany. Etsy ankilany, ny homonimia dia teny mitovy feo ary miaraka amin'izay koa, mitovy ny tsipelina azy ireo. Fahasamihafana lehibe eo amin'ny anarana nomanina sy ny homophone. Ny fahalalana ny fahasamihafana misy eo amin'ny homônôma sy ny homôfônia dia afaka manampy anao hampiasa ny teny Anglisy amin'ny fomba mety sy amin'ny fomba mandaitra. Ity lahatsoratra ity dia manazava ny tsy fitovizan'ny homonyms sy homophones miaraka amin'ny ohatra.
Inona no atao hoe Homophone?
Ny homôfônia dia teny izay mitovy fanononana azy, fa samy hafa kosa ny tsipelina sy ny dikany. Raiso, ohatra, ireo teny roa hoe 'nahalala' sy 'vaovao'. Samy homofona avokoa izy roa amin'izany. Samy mitovy fanononana ny teny hoe 'nahalala' sy 'vaovao', saingy samy hafa ny tsipelina ary ny dikany samy hafa dia ny hoe 'ny lasa lasa fahalalana' ary ny 'ny mifanohitra amin'ny taloha'. Jereo ireo ohatra.
Fantatro fa nandainga izy.
Tiako ny lobanao vaovao.
Raha ny marina dia mora ny mahatakatra ny tena dikan'ny homôfônika raha mandinika ny sahan-kevitra nampiasanao ireo teny ianao.
Ny sasany amin'ireo ohatra mahaliana ao amin'ny homôfôna dia 'mihaona' sy 'hena'. Samy tononina mitovy ireo teny roa ireo, saingy samy hafa ny tsipelina sy ny dikany. Ny teny hoe "mihaona" dia midika hoe "manatevin-daharana", fa ny teny hoe "hena" kosa dia midika hoe nofon'ny biby. Jereo ireo teny hoe 'lalana' sy 'mitaingina'. Ny teny hoe 'lalana' dia manondro làlana iray, fa ny teny hoe 'mitaingina' dia ny toetran'ny 'mitaingina' taloha.
Inona no atao hoe Homimona?
Ny homonimia dia teny mitovy fanonona sy tsipelina fa samy hafa ny dikany. Ankehitriny, somary sarotra noho ny homophone ity. Jereo ireo fehezanteny roa omena etsy ambany.
Nikiakiaka aho satria nahita orsa nihazakazaka nankany amin'ny vaninay.
Naka mpamono fanaintainana aho satria tsy zakako intsony ny fanaintainana.
Ankehitriny, inona ny homonyms ampiasaina amin'ireo fehezanteny ireo? Izy ireo dia bera sy bera. Izy ireo dia teny roa samy hafa izay manana feo mitovy ary miaraka amin'izay koa, mitovy ihany ny tsipelina azy ireo, saingy hafa ny dikany. Ny teny hoe 'bera' amin'ny fehezanteny voalohany dia manondro biby dia. Etsy ankilany, ny teny hoe 'mitondra' amin'ny fehezanteny faharoa dia manome ny hevitry ny hoe 'miaritra'. Ampiasaina ho verbe . Toa tena mahafatifaty ilay 'bera' biby, nefa mampidi-doza tokoa, ary mety hahafaty na dia ny zanak'olombelona aza. Noho izany, ny teny hoe 'bera' dia ampiasaina ho anona anarana.
Ohatra hafa amin'ny homonyms ny mpanazatra sy ny marary. Ny marary, amin'ny lafiny iray, dia manondro 'olona marary' ary, amin'ny lafiny iray hafa, dia manondro ny 'fiterahana zavatra iray.' Ny mpanazatra, amin'ny lafiny iray, dia midika hoe 'olona mampiofana atleta' ary, amin'ny lafiny hafa, dia manondro 'karazana sarety.'
Inona no maha samy hafa ny Homonimona sy Homophone?
• Ny homôfônia dia teny izay mitovy fanononana azy, fa samy manana ny fanononana azy sy ny heviny.
• Etsy ankilany, ny homonimia dia teny mitovy feo ary miaraka amin'izay koa, mitovy ny tsipelina ao aminy.
• Ohatra sasantsasany amin'ny homôfôna dia ny hena sy ny fihaonana, ny fahalalana ary ny vaovao, ny lalana ary ny mitaingina.
• Ohatra vitsivitsy amin'ny homonyms ny bera, ny marary ary ny mpanazatra.
Ireo no fahasamihafana lehibe indrindra manelanelana ireo teny mahaliana roa ampiasaina amin'ny teny anglisy, dia ny hoe homonome sy homophone.
Fahasamihafana etsy sy eroa amin'ny fitsipi-pitenenana anglisy Fahasamihafana eo amin'ny renivohitra sy ny kapiteny Fahasamihafana eo amin'ny Confirm sy Conform Fahasamihafana eo amin'ny fihazonana sy ny fanohanana Fahasamihafana eo amin'ny tsipelina sy ny fanononana
Filed Under: Words Tagged With: ohatra ny homonyms , ohatra ny homophones , homonym , Homonym Definition , homonym meaning , homonym midika , homonyms , homophone , homophone sy homonym , famaritana homophone , homophone dikany , homophone midika , homophones , fanononana , tsipelina , mahazaka
Fahasamihafana eo amin'ny Leucoplast Chloroplast sy Chromoplast
Fahasamihafana eo amin'ny Optimus Black sy Samsung Infuse 4G
Fahasamihafana eo amin'ny Fricative sy Affricate
Fahasamihafana eo amin'ny PADI sy SSI
Fahasamihafana eo amin'ny Rhino Mainty sy ny Rhino Fotsy